Kolonely Breziliana, Maty Iray Volana Taorian’ny Niekeny Fa Nampijaly Olona Izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2014 3:30 GMT
I Kolonely Paulo Malhães mametraka fiampangan-tena tao amin'ny Vaomiera Nasionalin'ny Fahamarinana ao Brezila, ny volana Martsa 2014. Sary avy tamin'i Marcelo Oliveira / ASCOM – CNV
[Mitondra amin'ny pejy amin”ny fiteny Portiogey ny rohy rehetra]
Tamin'ny faran'ny volana Martsa, tonga tao amin'ny tranoben'ny Vaomiera Nasionalin'ny Fahamarinana ao Brezila (CNV) ny Kolonely misotro ronono Paulo Malhães, nipetraka tamin'ny seza atosika ary nanao solomaso miaro amin'ny masoandro izy. Tonga hilaza fiampangana anisan'ny mavesatra indrindra heno ary nisy tamin'ny fotoanan'ny didy jadona teo amin'ny firenana izy, izay niantomboka tamin'ny 31 martsa 1964 ka hatramin'ny 15 Martsa 1985.
Iray volana monja taty aoriana, tamin'ny 25 Aprily 2014, hita maty ilay niampanga tena ho nampijaly sy namono olona. Araka ny loharanom-baovao navoakan'ny polisy, nalaina lehilahy telo ankeriny, natao takalon'aina niaraka tamin'ny vadiny sy mpanampiny iray tao an-tranony tao Nova Iguaçu, tao Rio de Janeiro i Malhães.
Mieritreritra ny polisy fa famafàna antontan-taratasy porofo, famaliana faty ary halatra fitaovam-piadiana no niseho – satria lasa nitsoaka niaraka tamin'ny tahirim-basy manokan’ ilay kolonely izay nangoniny ireo mpangalatra – izay no mety ho anton'io famonoana io. Ny mpitsabo nizaha ny vatana indray nilaza fa antony natoraly no nahafaty azy. Efa nanamafy ihany koa ny fianakavany fa nararin'ny aretim-po i Malhães, izay 76 taona. Navela ho velona ny vadin'ny kolonely sy ny mpanampiny.
Na dia izany aza, nangataka ny CNV mba hiditra an-tsehatra koa ny polisy federaly amin'ny fanadihadiana io raharaha io.
Niampanga tena, fa tsy nanenina mihintsy
Araka ny loharanom-baovao naelin'ny gazetiboky Carta Capital, nilaza i Malhães nandritra ny “nametrahany ny fiampangan-tenany manokana” fa manahy ny amin'ny ainy izy. Nandà tsy nanome ny anaran'ireo mpiasam-panjakana izay niaraka niasa taminy nandritra ny fitantanana miaramila moa ny kolonely, nilaza izy fa “ tsy afaka hanome ireo anarana mihintsy satria hitondra loza ho an'ny ainy izany”.
Tamin'ny fiampangana napetraka tao amin'ny Vaomieram-panjakana momba ny Fahamarinana ao Sao Paulo sy tao amin'ny Vaomiera Nasionalin'ny Fahamarinana, niampanga tena i Malhães ary nanome ny ambangovangony tamin'ny fomba nanaovana ny fampijaliana, ny famonoana ary ny fametrahana ireo vatana avy eo – tafiditra amin'izany ny fanesorana ny solonify ary ny famotehana ny vatana mba hahasarotra kokoa ny famantarana ny razana. Tamin'ny volana Febroary lasa teo, nilaza ho tompon'antoka tamin'ny fanjavonan'ny vatan'ilay solombavam-bahoakam-panjakana Rubens Paiva [en] izy, raharaha nalaza nandritra ny fotoanan'ny didy jadona, saingy taoriana kelin'izay, nisintona ny fijoroany vavolombelona izy.
Rehefa nanontaniana izy hoe firy ny olona novonoiny, novalian'ilay kolonely maina be hoe “Maro, izay tokony novonoina rehetra”. Hatramin'ny niantombohan'ny andraikitry ny CNV tamin'ny taona 2012, i Malhães no mpiasam-panjakana fahadimy nijoro vavolombelona teo anoloan'ny daholobe, faharoa niaiky ny fampiasàna fampijaliana matetika ary voalohany niampanga ny tenany ho nandray anjara tamin'izany famonoana olona izany.
Tsy niaiky mihintsy izy hoe nanenina. Nifanohitra tamin'izany aza, nanambara toy izao izy vao nanomboka ny fihainoana azy:
Ohatra ny zavatra rehetra ataoko nandritry ‘ny fiainako, nanome ny tsara indrindra taty amiko aho tamin'io asa io. […] Nahavita ny adidiko aho. Tsy nanenina ny amin'izany aho.
‘Fandraisanao mivantana an-tànana ny fitsaràna ‘
Nanery an'i Brezila hijery ny fitondràna jadona nisy tao ho tantara mety mbola tsy tapitra, angamba, ny fahafatesan'i Malhães. Nitondra adihevitra momba ireo mpamono olona tamin'ny lasa tsy ela akory, izay tsy mbola niatrika fanamelohana mihitsy ihany koa io. Ny lalànan'ny Famotsoran-keloka, izay mbola mitohy manan-kery eo amin'ny firenena, dia tsy mamela ny hitondrana ireo mpampijaly olona hoeo anatrehan'ny fitsaràna.
Mpitoraka bilaogy ary mpikatroka mafana fo iray, Douglas Belchior – fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Negro Belchior – nilaza fa malahelo ny amin'ny nahafatesan'ilay mpampijaly olona izy, ary mampatsiahy ny onjan'ny fitsaram-bahoaka izay niparitaka be nanerana ireo tanàna Breziliana tamin'ny niandohan'ny taona 2014:
Fitsaràna nataon'ireo vondrona mpanohitra ny didy jadona ve iny? Sa valifaty nataon'ireo fianakaviana sy naman'ireo maty nampijaliana ve? Tsy mino aho hoe izany no antony. Maharesy lahatra kokoa ny mieritreritra hoe hetsika natao fotsiny mba hampihorohoroana ireo mety mbola hilaza ny marina any aoriana momba ireo zava-doza nataon'ireo miaramilam-panjakana nandritra iny fotoanan'ny famoretana iny.
Fa te-hiresaka ny momba ny hafatra mipetraka aho eto: ny fandraisanao mivantana an-tànana ny fitsaràna. Famonoana olona, fampijaliana, fanjavonana olona ary fitsaram-bahoaka atao amin'ny olona tsy mbola notsaraina, miseho matetika ireo tranga ireo izao anefa toa tsy dia asiana resaka, hita miantomboka amin'ny hetsika ataon'ny polisy izany, izay ahitantsika ohatra maro. Ary ankehitriny efa lasa hetsika atosiky ny “vahoaka” .
Manamafy izany ny kabarin'ny mpanjakazaka: “Noho ny tsy fisian'ny lalàna no anton'izao! Manao izay rehetra tiany atao ny mpamono olona, ary mahatsiaro tsy voaaro ny vahoaka. Ny fandraisanao mivantana an-tanàna ny fitsaràna izao no malaza”.